Hailemariam oo sheegay in isbeddel ku dhacay Ethiopia oo qasbaya in Somalia ay... - Caasimada Online
Home Warar Hailemariam oo sheegay in isbeddel ku dhacay Ethiopia oo qasbaya in Somalia...
Hailemariam oo sheegay in isbeddel ku dhacay Ethiopia oo qasbaya in Somalia ay…
Addis Ababa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqday dhawaan dalka Itoobiya halkaas oo uu kulan xasaasi ah kula qaatay Ra’isulwasaaraha Itoobiya H.E. Hailemariam Dessalegn, wuxuuna kulankaas ahaa midkii ugu horeeyey ee dhex mara labada Mas’uul.
Qodobada aan warbixintaan uga hadli doono waa Hailemariam oo sheegay in Ethiopia aysan ahayn sidii hore, ayna ku xiran tahay Soomaaliya, waxaadna qodobkaas ka daawan kartaa muuqaalka hoose, gaar ahaan daqiidda 13:15 – 14:21.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya ayaa xusay inaysan Itoobiya aheyn sidii hore oo ay jiraan dad isku dayo inay weli sawiraan Itoobiya inay thaay sidii hore.
Itoobiya sidii hore maaha, dad ayaa isku dayaya in weli ay u sawiraan Itoobiya inay tahay sidii hore, Itoobiya hadda waa mid ka duwan sidee waagii hore, waa mid dooneysa isku xirnaan” ayuu yiri Ra’isulwasaaraha.
“ Itoobiya hadda kaligeed wax ma noqon karto, Soomaaliya iyana kaligeed wax ma noqon karto, waan isku xiranahay, waxaan barwaaqo ku gaari karnaa oo kaliya inaan isla shaqeyno, iskana kaashano dhan walba” ayuu sii raaciyey.
Hadalkaan ayaa ujeedkiisa ahaa inay soo dhamaatay cadaawadii ka dhaxeysay Soomaaliya iyo Itoobiya lagana soo gudbay, markaana loo baahan yahay inay labada dal iska kaashadaan dhanka amniga, dhaqaalaha iyo horumarka.
Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa ka dhaxeyso cadaawad soo jireyn ah, wuxuuna dagaal xoog badan dhex maray sanadkii 1977 markaas oo ay Soomaaliya gudaha u gashay Itoobiya iyadoo ku dadaaleysay inay soo ceshato dhul ay Soomaaliya ka heysatay, balse markii waa lagu guul dareystay ilaa haddana way heysataa.
Hadalkaasna dadka Soomaaliyeed marnaba ma aamini karaan, maadaama labada dal uu ka dhaxeeyo cadawtinimo soo jireyn ah.